नेता रावललाई विमानस्थलको भिआइपी कक्षमा प्रवेश गर्न रोक किन गरियो …हेर्नुहोस !
धनगढी ,धनगढी विमानस्थलको विशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न नपाएपछि पूर्वउपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले आ,क्रोश व्यक्त गरेका छन्। वि,शिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न नपाएपछि ट्रली बोक्ने बाटोबाट विमानस्थलबाट बाहिर निस्कनुपरेको उनकाे गुनासो छ। शनिबार बिहान काठमाडौंबाट श्री एयरलायन्सको विमानमा ९:१२ मा धनगढी पुगेका नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य एंव सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका रावलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आ,क्राेश पाेखेका हुन्। ‘मैले विमानस्थलको वि,शिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न नपाएकोमा गुनासो होइन,’ उनले भने’ ‘तर, मलाई सुरक्षा व्यवस्थाबारे जानकारी दिइएन।’
उनले आफुमाथि त्यस्तो व्यवहार किन गरिएको भन्ने जिज्ञासा राखे। शनिबार धनगढीबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको काठमाडौं फर्कने कार्य सूची रहेको थियो। राष्ट्रपति काठमाडौं फर्कनका लागि विमानस्थल जाँदै थिइन्। सोही का,रण वि,शिष्ट कक्षमा सुरक्षा व्यवस्था क,डाई गरिएको थियो। सुदूरपश्चिम इन्चार्ज रावलले भने, ‘वि,शिष्ट कक्षमा को–को, कस्ता–कस्ता व्यक्ति जानपाउँछन्? भन्ने सूची बनाइयो र त्यसमा हाम्रो पद परेन भने सर्वप्रथम त्यो कार्यान्वयन गर्न म तयार छु।’ उनले सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी नभई सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने व्यक्तिलाई दोषी बनाए।
उनले भने, ‘सुरक्षाकर्मीलाई दो,ष छैन। उनीहरुले माथिको आदेशमा काम गर्छन्।’ एक अर्को प्र,शंगमा बोल्दै इन्चार्ज रावलले एमसिसीमा जनताको चासो बढेकोमा खुसी व्यक्त गरे। उनले एमसिसीबारे तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन पार्टीले कार्यदल गठन गरेको बताए। उनले भने, ‘पार्टीको आधिकारिक धा,रणा नआएकाले यस विषयमा म धेरै बोल्न चाहन्न।’ उनले रा,ष्ट्रियसभा सदस्यबारे पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णय सबैले मान्नु पर्ने बताए। उनले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेका निर्णय सबैले मान्नुपर्ने पार्टीको विधानमा छ।’
स्कटल्यान्डमा प्रधानमन्त्री देउवा र नरेन्द्र मोदीबीच भेट हुने
गुल्मी पुगेर गर्जिन शहरी विकासमन्त्री झाँक्री, माधव नेपाललाई धोका दिनेलाई लगाइन् यस्तो आ,रोप…हेर्नुहोस।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जान्छौं
राजनीति जोगाउन फेरि लाखौं जनताले बलिदान दिनुपर्छ: बाबुराम भट्टराई
माओवादी प’तन नपारेसम्म नेपालीको जीवन सुखी हुँदैन : रामेश्वर खनाल